Tontolo Arabo: Mifaninana amin’ilay fifaninanana antsoina hoe Arabisk ireo mpitoraka bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2011 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Toy ny fanao isan-taona, dia mifaninana ny mpitoraka bilaogy Arabo, mahakasika ny hoe “Ny bilaogy Arabo tsara indrindra amin'ny taona 2011″ . Io fifaninanana io dia nomena anarana hoe Arabisk.
Nozaraina ho sokajy efatra ny fanendrena ireo bilaogy: ny bilaogy tsara sy miavaka indrindra, ireo bilaogy vaovao tsara indrindra, ireo bilaogy mahay maneho tsara indrindra ny sampana nosafidiany ary ny bilaogy mampiala voly indrindra. Hahazo loka roa ny mpandresy amin'ireo sokajy tsirairay ireo: mari-pankasitrahana avy amin'ny mpamaky ary mari-pankasitrahana avy amin'ny mpitsara.
Efa nisokatra nanomboka tamin'ny faha 15 Janoary ka hatramin'ny faha 15 Febroary ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana; nomena alalana hifidy ireo bilaogy tsara indrindra araka ny safidiny ny mpamaky nanomboka tamin'ny faha 16 Febroary ka hatramin'ny faha 28 Febroary; ny 1 Martsa, dia ampahafantarina ireo bilaogy 20 voalohany isa-tsokajy; ary hotsarain'ny mpitsara ireo voafidy ireo manomboka ny faha 1 Martsa ka hatramin'ny faha 31 Martsa.
Ny fanambarana ny valin'ny fifaninanana dia antenaina ho amin'ny fiandohan'ny volana manaraka.
Raha ny voaloazan'ny vohikala (ar):
Ny Arabisk dia fifaninanana fanao isa-taona hisafidianana ireo bilaogy Arabo tsara indrindra nosoratana tamin'ny fiteny Arabo. Ny tanjona amin'izany dia ny mba hampitombo ny fahaizan'ireo mpitoraka bilaogy Arabo sy hampirisika ny tanora hamorona bilaogy sy hanampy ny famoahana vaovao mikasika ny Arabo amin'ny alalan'ny aterineto.
Toy izao manaraka izao ny fitsipiky ny fifaninanana:
Tsotra ny fifaninanana ary misokatra ho an'ny mpitoraka bilaogy Arabo maro an'isa. Izay no mahatonga azy ho tsy hanana fitsipika maro, afa-tsy anankiroa fotsiny izay ahafahana manatratra ny tanjon'ny fifaninanana:
1. Ny votoatin-dresaka ao anatin'ireo bilaogy mandray anjara amin'ny fifaninanana ireo dia tokony ho tsy nalaina tahaka avokoa. Tsy ekenay ireo bilaogy mamoaka zavatra ahitana fakan-tahaka raha toa ka tsy nahazoana alalana tamin'ilay tena tompony izany. Tsy afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana koa ireo bilaogy izay tsy ahitana afatsy fangalàna sy fandikàna lahatsoratra ao amin'ny aterineto , eny na dia efa nahazoana alalana tamin'ny tompony aza izany.
2. Tokony hanaja amin'ny ankapobeny ny kolotsain'ny fiarahamonina Arabo ireo bilaogy mandray anjara. Tsy ampidirina amin'ny fifaninanana ireo bilaogy miresaka firaisana ara-nofo.
Avy amin'ny firenena Arabo samihafa ny mpitsara. Ireto avy izany: Wael Ghonim, Basem Shaheen, Muhammed Bashir, Fouad Alfarhan, ary Moammar Aamer.
Afaka mifidy bilaogy maro araka ny tiany ireo mpamaky, mandritra ny fotoana andraisan'izy ireo anjara mandritra ny fifaninanana izany hoe eo amin'ny fotoana fanomezana mari-pankasitranana avy amin'ny mpamaky.
Tsy tahaka ny fifaninanana bilaogy tsara indrindra hita hatrizay ny Arabisk izay manana rafitra fifidianana tokana natokana ho an'ny mpamaky, izay afaka mifidy bilaogy maro izay tiany isa-tsokajy.
Amin'izay dia tsy ho sahirana ny mpamaky eo amin'ny hoe bilaogy iza no hofidiana isa-tsokajy ka tsy ho voatery hifidy bilaogy iray fotsiny izy ary tsy handinika ny ambiny rehetra, raha toa ka mifanakaikikaiky amin'ilay iray tena tiany ny kalitaon'ilay bilaogy. Io rafitra io dia manampy ny mpamaky eo amin'ny fifidianany ary manome vintana sahala ny bilaogy rehetra mba handresy, raha toa ka mendrika izany izy ireo